Fandalinana vaovao: Ahoana ny Hitahirizana ny Vaovao Mahakasika ny Daholobe Amin’ny Vanim-potoanan’ny Angondrakitra Habeas · Global Voices teny Malagasy
Fandalinana vaovao: Ahoana ny Hitahirizana ny Vaovao Mahakasika ny Daholobe Amin'ny Vanim-potoanan'ny Angondrakitra Habeas
Voadika ny 07 Marsa 2019 11:40 GMT
Nosoratan’ i Verónica Ferrari, mpikaroka ao amin'ny CELE, sy i Samantha Valliere, mpianatra asa ao amin'ny CELE.
Nandritra izay folo taona lasa izay, lasa mpisava làlana amin'ny resaka politikam-panjakana momba ny fangaraharana i Amerika Latina — noraisina ary mbola alalinina ankehitriny ny lalàna maro manome antoka ny fahafahana miditra amin'ny vaovao mahakasika ny daholobe.
Fa fanontaniana iray tsy noraharahian'ny governemanta ary mbola tsy maintsy atrehin'ireo mpikatroka ny momba ireo tahiry. Satria mihabetsaka hatrany ireo vaovao mahakasika ny daholobe no lasa mora idirana, ahoana no tokony hitantanana ireny antontan-taratasy ireny?
Sary ”Open Here” nataon'i Libby Levi, avy tao amin'ny Flickr (CC BY-SA 2.0)
Tany amin'ny taona 1980 tany, satria nanome làlana ho an'ny fanovàna demokratika ny didy jadona tany Amerika Atsimo, niara-niasa ireo mpiandraikitra tahirin-tsoratra (arsivista) sy ireo mpisolovava ny zon'olombelona mba hikaroka ny taloha sy hamantatra ireo fanitsakitsahana ny zon'olombelona nitranga nandritra ny jadona nisy tao Shily, Arzantina ary toerana maro tao amin'ny faritra. Fa tsy nisy nitohy na iray aza tamin'ireo asa ireo tao anatin'ny fivoaran'ny lalàna mikasika ny fidirana amin'ny vaovao mikasika ny daholobe.
Mitady ny hamenoana izany banga izany amin'ny fampifandraisana fanatontoloana sy fitantanana ny vaovao amin'ny fametrahana ny fidirana amin'ny vaovao ilay lahatsoratra iray vaovao avy amin'ny Foibe ho an'ny Fandalinana ny Fahalalahana Maneho Hevitra sy Fidirana Amin'ny Vaovao ao amin'ny Oniversite Fianarana Lalana ao Palerma any Arzantina. Tanjona fototr'ilay asa ny hamantatra ireo hetsika fototra mila raisina na omen'ireo Fanjakana mba hametrahana politika fitantanana iraisana mikasika ny vaovaom-bahoaka.
Manadihady ireo adihevitra misy eo amin'ireo mpiandraikitra tahirin-tsoratra (arsivista) sy ny fidirana amin'n vaovao ilay lahatsoratra no sady mamakivaky ireo fanontaniana ara-teknolojika ao anatin'ny fitantanana ny vaovao sy ireo fanamby miseho eo amin'ny fiarahamonin'ny vaovao, ny fandraketana ho dizitaly sy ny fitantanana misokatra, ary koa ny fiforonan'ireo tahirin-tsoratra. Manome topimaso mikasika ireo lalàna mifehy ny fitantanana ireo tahirin-tsoratra any Amerika Latina ihany koa izy io, ary koa fijery iraisam-pirenena mikasika ny fidirana amin'ny vaovao sy ireo tahirin-tsoratra.
Afaka jerena eto ilay lahatsoratra feno miaraka amin'ny toko voafantina amin'ny teny Anglisy.